DOWNLOAD Boeing 747-200 Air France FS2004
747-200 Boeing Air France FS2004 HOT
Boeing mahafinaritra 747-200 loko AIR FRANCE (Version 2004) misy fomba fijery elatra sy koba vaovaon'ny tena izy!
Nampidirina tao 1972, ny 747-200 manana naroson'ilay ambony turbojets sy-drafitra faobe dia lehibe kokoa noho ny 747-100. Ny tahirin mamela ny kalesy ny solika noho ny hoe: Izao no mitombo ny isan-karazany. Amin'ny ankapobeny dia niavaka noho ny valo-tokotanin-tsambo varavarankely (orinasa sasany nividy ny fanovana ATSIMO - Streched Ambony Deck: nanolotra ambony tokotanin-tsambo - manome ny endriky ny B747-300). Modely ao amin'ny 200 Series Classic, naorina tao amin'ny tany am-boalohany 1990s, afaka mamakivaky ny 12 700 km feno entana.
Downloads 21 001
Nohavaozina taminy 06-08-2012
Repaint de Project Opensky